Mepee Rubber na-agwakọta Mill, Rubber na-agunye Mill Mill, China Roll Milling abụọ na China
Nkọwa:Mepee Rubber inggwakọta Mill,Roba inggwakọta Mill Mill,Abụọ na-akpụgharị agwakọta Mill,Rubber inggwakọta Mill,,
Home > Ngwaahịa > Abụọ Roll Mill > Agbanwe Agbanwe Agbanwe Gbanwee Twil Mill
Ngwaahịa nke Agbanwe Agbanwe Agbanwe Gbanwee Twil Mill , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mepee Rubber inggwakọta Mill , Roba inggwakọta Mill Mill suppliers / factory, wholesale high-quality products of Abụọ na-akpụgharị agwakọta Mill R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
18 Inch Millgwakọta Mill na Varaible Speed  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe illinggba Mbelata Mpempe ọkụ Lab  Kpọtụrụ ugbu a
Varaible Speed Two Roller Open Mill  Kpọtụrụ ugbu a
Speed ​​ọsọ abụọ na-agwakọta Mill  Kpọtụrụ ugbu a
18 Inch Millgwakọta Mill na Varaible Speed
LINA 18 Inch Graphener inggwakọta Mill na Njikwa Ọsọ Ọsọ Higher enyi na enyi, elu nchekwa, elu akara nkenke, elu anwụ ngwa ngwa na magburu onwe okpomọkụ akara bụ Lina Rubber Varaible Speed Ohere mepe emepe Mill na-eme ka LINA dị iche iche na ụlọ...
Mpempe illinggba Mbelata Mpempe ọkụ Lab
LINA 16 Inch Varaible Speed ​​Stock Blender Roba inggwakọta Mill LINA etinyere aka na Rubber Mixing Mill Machine kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ. The Mass mmepụta Abụọ Roll Rubber Ịgwakọta Mill nwere ike ahaziri site ina. LINA etinye aka na igwe na-...
Nkwakọ ngwaahịa: Plastic film packing
Speed ​​ọsọ abụọ na-agwakọta Mill
LINA 4 Inch Precise Varaible Speed abụọ Roll Mepee Ngwakọta Mill Ọsọ LINA Varavable Abụọ Roll Open Mill na -ebute ụzọ na ụlọ ọrụ igwe na roba China. High nkenke na elu nchekwa bụ LINA`s Rubber Varaible Speed abụọ Roll Milling Machine si isi uru....
China Agbanwe Agbanwe Agbanwe Gbanwee Twil Mill Ngwa
LINA Abụọ na-agagharị na igwe na-agba ọsọ
A pụrụ itinye ụdị nguzogharị ozigbo nke LINA Igwe Ngwakọta Ngwakọta maka igwe nyocha abụọ na akara mmepụta ihe. Ofdị abụọ a na - eme ka igwe na - agbagharị ọsọ nwere ike ịhazi ọsọ onye na - agba ọsọ ọsọ. Ihe ntụgharị ugboro ugboro bara uru iji chịkwaa usoro ịmepụtacha ma chekwaa ọkụ eletrik. Lina agbanwe Speed Open Mill bụ iche n'ime otu akakabarede na abụọ akakabarede.
Ọrụ nchekwa bụ ntụle mbụ nke LINA Open Mill . Ọ bụ uru na banyere Lina Abụọ Roll Open Mill 's nchekwa ngwaọrụ nwetara ọtụtụ mba nchọpụta Kemịkalụ. Ndị injin LINA emeela nchọpụta ma mepụta ngwaọrụ nchekwa dị oke egwu dị ka bọtịnụ nkwụsị mberede ogo 360, ngwaọrụ mgbanaka, ngwaọrụ nchekwa ergonomics na ihe mmetụta infrared wdg.
A na-eji akwa igwe LINA mee igwe dị elu, nke a na-agwọ site na nitriding na elu chromium siri ike. Ihe na-eme ka oghere dị mma na -eme ka ahụ dụọ ahụ ngwa ngwa, ọ bụ dabere n'ịdị n'otu na ịcha akwa nke ibé akwụkwọ.
1. Nhọrọ dịgasị iche iche na ngwaọrụ nchekwa dị oke ọ bụghị naanị na-echebe nchekwa nke ndị ọrụ kama ọ na-eme ka arụmọrụ dị mma.
2.Enxty-friendly na onye-enyi na enyi iji belata ike oriri na-eri.
3.Igbo ọgụgụ isi PLC na-achịkwa ihe ndekọ ma na-ebupụ data n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ dị mfe, nke na-ahụ na nkwụsi ike nke usoro.
4. Kama usoro ọdịnala iji hụ na arụmọrụ nchekwa nke ndị ọrụ, ngwaọrụ nchekwa nchekwa nke LINA chebere onye ọrụ ahụ site na isi ihe egwu.
Magburu onwe ya ọdịdị : LINA igwe eji emepụta igwe ihe eji eme ihe eji emeputa ihe ohuru nke oma na oru di nma, nke na enyere aka n’onu ike.
Nchedo dị nchebe: Onye na-akwagharị oche ahụ na-akwadokwa ọnọdụ mberede mberede na ngwaọrụ braking, nyocha nke akpaaka na nchekwa ergonomics iji hụ na nchekwa ọrụ.
Usoro njikwa ọgụgụ isi PLC: 1. Ejiri data ndekọ ezigbo oge na mbupụ nke oge ikpere, okpomọkụ (agwakọta ụlọ na n'ihu / n'azụ rotors), mgbali ebule, ugbu a, iyi iyi na koodu ntinye. 2. Enwere ike ịhazi usoro nchịkwa ruo ngwakọta agwakọta 20, chekwaa oghere uzommeputa 20. 3. Igwe njikwa nwere ike ibubata usoro ntụrụndụ usoro na nlekota data, yana soro MES na-enwe nkwukọrịta Ethernet. 4. Edebere usoro nkwukọrịta Ethernet na 20% nke akara nchịkwa echekwara. Enyere ihuenyo mmetụ aka.
Mmekorita nke LINA
1. Enyemaka nrụnye saịtị dị. (Enweghị ụgwọ na nrụnye na ịnwale ikpe, mana ụgwọ VISA, ụgwọ ụlọ na ụgwọ njem ụgbọ mmiri wdg nke onye na-ere ya na-akwụ ụgwọ maka ya.)
A na-enye ọzụzụ nke onye na-ahụ maka ọrụ na ndị na-ahụ maka ndozi na ndị na - ahụ maka ọrụ ogologo oge.
Mepee Rubber inggwakọta Mill Roba inggwakọta Mill Mill Abụọ na-akpụgharị agwakọta Mill Rubber inggwakọta Mill Carke PadsRubber inggwakọta Mills